version 0.7.0 – ဘာသာပြန်ချက် interface ၏အနာဂတ်!
ဇန္နဝါရီလ 12, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု3comments
Transposh ၏နောက်အဓိကဗားရှင်းလွှတ်ပေးရန်ဒီမှာ, ကျွန်တော်ဗွီဒီယိုအတိုကိုဖန်ဆင်းထားသောအခါသမယကိုဆင်နွဲဖို့ (အကွောငျး 11 မိနစ်) . ဗားရှင်းအသစ်အတွက်ရရှိနိုင်သော features အသစ်မိတ်ဆက်ခြင်း. သင့်အနေဖြင့်ဗီဒီယို watch နှင့်ဘာသာပြန် plugin ကို update ကိုရုပ်ရှင်များအတွက်လာမည့်အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ဆုကအမည်စာရင်းတင်သွင်းဖို့ကကြိုဆိုထက်ပိုပါတယ်.
သင်အသစ်များကို version တွင်သတိပြုမိလိမ့်မည်ကိုပထမဦးဆုံးအချက်ကတော့ user interface ကိုအဓိက update ကိုဖြစ်, အဲဒီလိုလာမယ့် / ယခင်ခလုတ်အဖြစ် interface ကိုမြင့်မားစွာမေတ္တာရပ်ခံရဲ့ features စုံတွဲတစ်တွဲကဆက်ပြောသည်ပါပြီ, ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ကြောင်းက Automated ဘာသာပြန်ချက်များကိုနှင့်တွေ့ရှိချက်စာပိုဒ်တိုများ၏ခွင့်ပြုချက်. ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြောသည်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ feature ဟာပြီးသားကို manually ကပြောပါတယ်ဘာသာစကားထားသောခဲ့လျှင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားမှာမူရင်းထားသောစာပိုဒ်တိုများကြည့်ရှုရန်ဘာသာပြန်တဲ့များအတွက်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထားသောအရာဟေဗြဲဘလော့ဂ်ရှိသည်ယူဆ, ဘာသာပြန်တဲ့သူကတခြားဘာသာစကားမှအင်္ဂလိပ်စာကနေသင့်ရဲ့ site ကိုဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပေမည်, အရာကိုသူ့အဘို့ပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်. ကျွန်မကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ဟာနန် မူလကဒီ feature အတွက်တောင်းဆို. ဒါဟာသမိုင်းပေးတဲ့ dialog ကနေဘာသာပြန်ချက်များကိုဖယ်ရှားရန်ယခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်, ဘာသာပြန်ချက်အရည်အသွေးပေါ်တင်းကြပ်ထိန်းချုပ်မှုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတွက်ခြေလှမ်းအရာဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ interface ကိုစ sleeker ဖြစ်ပါသည်, စ localizable နှင့် themable ကြောင်းပိုကောင်းသလို UI နှင့်အတူ, သင်က widget က setting တွင်ထိုဆောင်ပုဒ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်, ထိုသို့ကြည့်ရှုမည်ကိုမည်သို့အပေါ်ချုပ်ကိုင်ထားရရန်နေရာကောင်းတစ်ခုပါပဲ themeroller. သင်သည်သင့်ဘာသာစကားမှ interface ကိုဘာသာပြန်ဆိုနှင့်များအတွက်ခရက်ဒစ်လာပြီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် option ကိုအသုံးပြုပြီးအားဖြင့်သိစေကျေးဇူးပြုပြီး.
အဆိုပါလက်နက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတိုးတက်မှုများအတွက်နေဆဲဖြစ်သည်, နှင့် Transposh ပထမဦးဆုံး plugin တခုဖြစ်တယ် (ကျနော်တို့ကိုသိသော) အထောက်အပံ့ (တကယ်အထောက်အပံ့, အလုပ်လုပ်အထောက်အပံ့) အတွက် 60 သုံးပြီးအဘိဓါန် Esperanto ထောက်ခံမှုထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဘာသာစကားများ Apertium အင်ဂျင်ကို, ယခုအဘို့သာအင်္ဂလိပ်စာနှင့်စပိန်ဘလော့ဂ်များအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်တောင်းဆိုချက်အပေါ်သို့ပိုဘာသာစကားများကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်.
ပို fixed အများအပြားပါဝင်ကြ, ဒေတာဘေ့စ updates တွေကို, ရှည်လျား meta keys ကိုဘာသာပြန်ချက်ရှာ, နှင့်ပိုပြီး – ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ် ~ 15 လက်မှတ်တွေပိတ် trac.
နောက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းအရေးပါသော – ဒီလွှတ်ပေးရန်အတွက်ဘာသာပြန်များများအတွက်ခရက်ဒစ်မှသွား: Amir ဟေဗြဲအားမိမိအဘို့နှင့်ဘာသာပြန်ချက် Ignacio စပိန်ဘာသာပြန်ချက်များအတွက်, ကျေးဇူးတင်စကားယောက်ျားတွေ!
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: 0.7, apertium ဘာသာပြန်ဆို, အသေးအဖွဲ, ပိုဘာသာစကားများ, လွှတ်ပေး, themeroller, UI, ဗီဒီယို